KohalpurNewsनेकपाको पोलिटब्युरो टुंगियो, पूर्वएमाले र माओवादीबाट को को ?
२७ बैशाख २०७६, शुक्रबार १४:५०
२७ वैशाख / सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले पार्टी एकीकरणलाई पूर्णता दिँदै १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो टुंगो लगाएको छ ।
पोलिटब्युरोमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको कोटामा परेका सदस्यहरुको नाम टुंगो लागे पनि पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर मात्रै सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले माधव नेपाल लगायतका नेतासँग छलफल गरेपछि पोलिटब्युरो गठनको सहमति भएको हो । अब प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि सचिवालय बैठक बसेर औपचारिक रुपमा पोलिटव्यूरो सदस्यहरुको नाम लिष्ट पारित हुने नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
अध्यक्ष ओली भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणबाट फर्केपछि स्थायी कमिटी बैठकमार्फत पोलिटव्युरो गठन र जनवर्र्गीय संगठन एकीकरण टुंगो लगाउने बारेमा छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।
केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरुको कार्य विभाजन समेत प्रस्ताव हुनेछ । अध्यक्ष ओली फर्किएपछि बस्ने बैठकमा कार्य विभाजन, पोलिटब्युरो र जनवर्गीय संगठन एकीकरणको प्रस्ताव जाने सम्भावना रहेको महासचिव विष्णु पौडेलले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओली जेठ १ गते स्वदेश फर्किंदैछन् । सम्भव भएसम्म जेठ ३ गते पार्टी एकताको एक वर्ष पुगेका अवसरमा सबै काम सक्ने तयारी रहेको नेताहरुले बताए ।
मापदण्डले प्रदेश पदाधिकारी आउट!
नेकपाभित्र प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र सचिवहरुलाई पोलिटव्यूरो सदस्य बनाउने प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि मापदण्डमा पर्नेहरुमात्रै पोलिटब्युरो सदस्य बन्नेछन् ।
नेकपाको विधानमा कम्तिमा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएकालाई मात्र पोलिटब्युरो सदस्य बनाउने व्यवस्था रहेकाले केही प्रदेश कमिटीका सचिव पोलिटब्युरो सदस्य बन्न पाएनन् ।
पोलिटब्युरो सदस्यको नाम समेत तय भइसकेकाले अब बैठकले अनुमोदन मात्र गर्न बाँकी छ । वरिष्ठताका आधारमा पोलिटव्यूरो सदस्य छान्दा प्रदेश कमिटीका कतिपय पदाधिकारी पनि समेटिन नसकेको एक नेताले बताए । प्रदेश ३ का सचिव आनन्द पोखरेलसहित केही पदाधिकारी पोलिटब्युरोमा नपर्ने भएका छन् ।
केही नेताले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवलाई स्वतः पोलिटब्युरोमा नपार्दा संगठन सञ्चालनमा समस्या हुने तर्क गरेका थिए । प्रदेश कमिटीमा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्यहरु पनि रहन्छन् । प्रदेश सचिवले आफू भन्दा माथिल्ला कमिटीको नेतालाई नेतृत्व गर्न प्राविधिकरुपमा नमिल्ने तर्क गरिए पनि पार्टीमा सहमति हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
पोलिटब्युरो गठनमा पनि पूर्व एमालेभित्र मापदण्डलाई लिएर अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीच पटक–पटक छलफल भएपछि साबिक एमालेका पोलिटव्युरो सदस्यहरु स्वतः हुने र बाँकी सदस्य बरिष्ठताका आधारमा छान्ने सहमति भएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । बरिष्ठताको मापन कतिपटक केन्द्रीय सदस्य बनेको भन्नेलाई बनाइएको छ । पार्टी एकताभन्दा अघि नै दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेकाहरु मापदण्डमा परेका छन् ।
पूर्वमाओवादीमा भने कुनै मापदण्डले काम नगर्ने भएकाले तत्कालीन ९९ सदस्यीय सचिवालयका सदस्यमध्येबाट ६५ जना सदस्य छानिने सम्भावना छ । अन्य पार्टीबाट एकता प्रक्रियामा आएकाहरुलाई समेत पोलिटब्युरोमा लैजानुपर्ने अवस्थामा एकाध सदस्य दुवै पक्षबाट थपघट हुनसक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजन
नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन समेत प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । कार्य विभाजन नहुँदा सांगठानिक काम हुन नपाएको तथा पार्टी कामले गति नलिएकाले कार्य विभाजन गर्न लागिएको हो । प्रदेश इञ्चार्ज, सहइञ्चार्जसहितका पदाधिकारी बाहेक केन्द्रीय कमिटीका अरु सदस्यको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
अब केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले विभाग र भूगोलको जिम्मेवारी पाउनेछन् । दुवै अध्यक्षको परामर्शमा महासचिव पौडेलले कार्य विभाजनको प्रस्ताव तयार पार्ने भएका छन् ।
४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा सबै सदस्यहरुलाई कम्तिमा एउटा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । ७७ जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज गर्दा १६४ जना नेताको व्यवस्थापन हुनेछ । जिल्ला इन्चार्ज सकेसम्म पोलिटव्यूरो सदस्यलाई बनाइने र पोलिटव्यूरो सदस्य नभएको ठाउँमा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाटै इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउने तयारी भइरहेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।
त्यस्तै पेशागत तथा विशेष जिल्ला कमिटीहरु र प्रवासका कमिटीहरुमा समेत केन्द्रीय सदस्यबाटै इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिने भएका छन् । यसअघि स्थानीय तहको इन्चार्ज समेत केन्द्रीय सदस्यलाई बनाउने भनिएकोमा अब जिल्ला तहबाट तलको इन्चार्ज केन्द्रबाट नपठाइने भएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार जिल्ला अध्यक्ष पूर्व एमाले भएको ठाउँमा इन्चार्ज पूर्व माओवादी र पूर्व माओवादी जिल्ला अध्यक्ष भएको ठाउँमा इन्चार्ज पूर्व एमालेबाट बनाइनेछ । यद्यपी कतिपय जिल्लामा यो मापदण्ड लागु नहुने एक नेताले बताए । इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको मिलाएर बनाउने तयारी छ ।
पोलिटब्युरोमा पूर्वएमालेबाट को को ?
साबिक एमालेबाट तत्कालीन पोलिटव्यूरको ५९ जना सदस्यबाहेक २३ जना नयाँ थपिने सम्भावना छ । केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका नेताहरु केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र बिष्णु पौडेल स्वत पोलिटव्यूरो सदस्य हुनेछन् ।
त्यस्तै स्थायी कमिटीमा रहेका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य,भीम रावल,घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, किरण गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल र बिष्णु रिमाल पनि स्वतः पोलिटव्यूरो सदस्य हुनेछन् ।
अनुशासन आयोग, सल्लाहकार परिषद र लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्षहरु अमृत बोहोरा, केशव बडाल र पुष्प कँडले पनि स्वतः पोलिटव्यूरो सदस्य हुनेछन् ।
तत्कालीन एमालेको पोलिटव्यूरो सदस्य रहेका प्रदीप नेपाल, शेरधन राई, काशिनाथ अधिकारी, राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, नागेन्द्र चौधरी, प्रकाश ज्वाला, परशुराम मेघी गुरुङ, सोमनाथ प्यासी, अरुण नेपाल, पशुपति चौलागाई, विन्दा पाण्डे, भानुभक्त ढकाल, महेन्द्रवहादुर पाण्डे नेकपामा पनि पोलिटव्यूरो हुनेछन् ।
यी बाहेक पूर्वएमालेबाट बढीमा २३ जना सदस्य थपिनेछन् । दुईपटक भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भइसकेका र पाँचांै महाधिवेशनकै केन्द्रीय सदस्य भए पनि हालसम्म पोलिटब्यूरोमा नपुगेहरुमध्येबाट ल्याउने सहमति नेताहरुबीच भएको छ । यसअघि पोलिटब्युरो सदस्य भएका, तर नवौं महाधिवेशनमा हारेकाहरु पनि सो मापदण्डमा परेका छन् ।
यी बाहेक दुईपटक वा सो भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भएकामध्येबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ,गुरु बराल,भानुभक्त जोशी,बिजय सुब्बा, केशवलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र यादव, शेरवहादुर तामाङ, राजेन्द्र राई, जीवनराम श्रेष्ठ, ठाकुर गैरे, जयन्ती राई, चूणामणि जंगली विश्वकर्मा, सुशीला नेपाल लगायतको नाम पनि पेश भएको छ ।
स्रोतका अनुसार डा।राजन भट्टराई, खिमलाल भट्टराई, सोमप्रसाद पाण्डे, गोमा देवकोटा, श्रीप्रसाद साह, चन्द्रवहादुर शाही, सुजिता शक्य, नजिर मिया लगायतका नेताहरुको नाममा पनि छलफल भएको छ ।
पोलिटब्यूरो सदस्य रहने सदस्यहरुको नामबारेमा एकसरो छलफल भए पनि अन्तिम टुंगो भने लागिनसकेको महासचिव पौडेलले बताए ।
पूर्वमाओवादीबाट ६२ जना पोलिटव्यूरो सदस्यमध्ये हाल स्थायी कमिटी तथा सचिवालयमा रहेका १९ जना स्वतः पर्नेछन् । अरु नेताहरुलाई समेट्नेबारेमा प्रचण्डले छलफल छलफल गरेर तत्कालीन ९९ सदस्यीय सचिवालयभित्रबाट छानेका छन् ।
यसअघि माओवादीमा धेरै ठूला कमिटी रहेको र बिभिन्न पार्टीबाट आएकाहरुलाई पनि समेट्नुपरेकाले भद्रगोल अवस्था छ ।
सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहेका प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामवहादुर थापाा बदल, टोपवहादुर रायमाझी, अमिक शेरचन, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ, गणेश शाह पोलिटव्यूरो सदस्य हुनेछन् ।
त्यसैगरी पूर्वमाओवादीबाट हितराज पाण्डे, विश्वनाथ साह, डिलाराम आचार्य, श्रीराम ढकाल, उर्मिला अर्याल, प्रभु साह, टंक राई, रामचन्द्र झा, रामेश्वर राय यादव, नारायण दाहाल, पासाङ शेर्पा, परशुराम तामाङ, हितबहादुर तामाङ, जगप्रसाद शर्मा, कमला रोक्का, झक्कु सुवेदी, सुरेश आलेमगर, महेश्वर दाहाल, सुर्य सुवेदी पथिक, अमृता थापा, कमल चौलागाई पनि पोलिटव्युरोमा प्रस्तावित छन् ।
यीबाहेक कालिबहादुर मल्ल, जोखबहादुर महरा, गणेशमान पुन, हरिराज अधिकारी, टंक आङ्बुहाङ, सुरेशुकमार राई, महेश्वर गहतराज, अञ्जना विशंखे, कृष्णध्वज खड्का, शिवकुमार मण्डल लगायतका नेता तत्कालीन माओवादीबाट पोलिटब्यूरो सदस्य बन्दैछन् ।